ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် မြှင့်တင်ပေးမယ့် စားသောက်သင့်တဲ့အစားအစာများ - Myanmarload
ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် မြှင့်တင်ပေးမယ့် စားသောက်သင့်တဲ့အစားအစာများ
လွန်ခဲ့သော ၁၁ နေ့ က 15:24 February 17, 2021
ခန္ဓာကိုယ်တွင် ခုခံအားကျဆင်းနေတယ်ဆိုပါကဆေးသောက်စရာ မလိုဘဲ သဘာဝ အစားအစာတွေနဲ့ပဲ ခုခံအားပြန်လည်ကောင်း မွန်အောင် ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ခုအချိန်အခါမှာလဲ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းလို့ လုံး၀မဖြစ်ပါဘူး။ Coivd 19 ရောဂါဟာလဲ မပျောက်သေးတာမို့ ကိုယ့်အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဂရုစိုက်တာကောင်းပါမယ်။ အောက်မှာတော့ ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်စေတဲ့ အစားအစာတွေိကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒိန်ချဉ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားတွေ ပါဝင်တာကြောင့် ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ပိုးမွှားတွေကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။ ဆွီဒင်မှလေ့လာသူများသည် ဒိန်ချဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အလုပ်သမား 181 ယောက်တွင် စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါမှာ ဒိန်ချဉ်ကိုရက်ပေါင်း 80 လောက်သောက်သုံးသူတွေမှာ အအေးမိနိုင်ချေဟာ 33% လျော့နည်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူမှာ အစွမ်းထက်တဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိပြီး ပိုးမွှားတွေကိုဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့ အစွမ်းထက်ပစ္စည်းအယ်လီစင် (Allicin) ဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုများအရ ကြက်သွန်ဖြူကို 12 ပတ်ခန့် စားသူတွေမှာ အအေးမိဝေဒနာ ခံစားရနှုန်းအလွန်နည်းပါးတာကိုတွေ့ရပါ တယ်။
ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြှင့်တင်တဲ့နေရာမှာ ကြက်စွပ်ပြုတ်ကတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ အာဟာရပညာရှင် မက်ဒင်နီရယ်ကဆိုပါတယ်။ ကြက်သားဟာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက် အဓိကလိုအပ်တဲ့ ဇင့်ဓာတ်၊ သံဓာတ်နဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကြက်စွပ်ပြုတ်မှာ အမိုင်နိုအက်ဆစ်“Cysteine” ပါဝင်တာကြောင့် ချွဲပျော်စေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ စွပ်ပြုတ်လုပ်ရာမှာ ဗီတာမင် ဒီ ကြွယ်ဝတဲ့ မုန်လာဥ၊ ကြက်သွန်ဖြူစတာတွေကို ထည့်ပြီးပြုတ်ပေးပါက ကိုယ်ခံအားကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမဲသားမှာပါဝင်တဲ့ ဇင့်(သွပ်)ဓာတ်ဟာ ကိုယ်ခံစွမ်းအား မြှင့်တင်ပေးတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါတယ်။ ဇင့်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးပါတဲ့ သတ္တုဓာတ်ဖြစ်ပြီး အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပိုးဝင်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အမဲသားမစားတဲ့သူဆိုရင်တော့ ဇင့် ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ပြည်ကြီးငါး၊ ဝက်သား၊ နို့နှင့် ဒိန်ချဉ်စတာတွေကို စားပေးနိုင်ပါတယ်။
လူ့အရေပြားဟာလည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်မှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ပိုးမွှားများမဝင်နိုင်အောင် ခံတပ်သဖွယ်ကာရံပေးထားပါတယ်။ ကန်စွန်းဥမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် A နှင့် ဗီတာမင် C ဟာ အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုတာကြောင့် ကန်စွန်းဥစားပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံမှုစနစ်ကို မြှင့်တင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာချက်များအရ ရေနွေးကြမ်း (သို့) လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည်ကို တစ်နေ့5ခွက်လောက်သောက်သုံးသူများတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ် (Interferon) ဟာ 10 ဆ မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ဖက်ရည်မှာ ခုခံအားကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဓာတ်များလည်း ပေါများစွာပါဝင်နေပါတယ်။
အရသာရှိလှတဲ့ မှိုဟာလည်း ခုခံအားစနစ်ကောင်းမွန်စေတဲ့ အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မှိုစားပေးခြင်းဖြင့် သွေးဖြူဥထုတ်လုပ်နှုန်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး သွေးဖြူဥများ၏ ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ထုတ်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုအစွမ်းထက်စေပါတယ်။
8. အခွံမာသော ရေသတ္တဝါ
ပုဇွန်၊ ကမာကောင်နှင့် ဂဏန်းတို့မှာ ပေါများစွာပါဝင်တဲ့ Selenium ဓာတ်ဟာသွေးဖြူဥများမှ ဆိုက်တိုကိုင်းပရိုတင်း(Cytokine) ထုတ်လုပ်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ၎င်းပရိုတင်းဟာ ဝင်ရောက်လာတဲ့ ရောဂါပိုးများကိုတိုက်ထုတ်ရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခွံမာသောရေ သတ္တဝါများမှာ Omega3ပါဝင်တာကြောင့် ရောင်ရမ်းမှုကို ဟန့်တားပေးနိုင်ပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
9. အုတ်ဂျုံ (Oats)
အုတ်ဂျုံကို မှန်မှန်စားသုံးပေးတာကြောင့် အအေးမိခြင်းသာမက ထောင့်သန်းရောဂါပိုးနှင့် ရေယုန်ရောဂါတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်စေရုံသာမက အနာကျက်စေတဲ့ အာနိသင်နဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် ဂုဏ်သတ္တိများလည်း ပါရှိပါသေးတယ်။
Page generated in 0.2465 seconds with5database query and6memcached query.